Ary uye Chakavanzika cheMwaka Yemahara Yekudhawunirodha Game - Yakazara Shanduro - Yakanakisa Yemahara PC Mitambo
Iyo 3D platformer Ary uye Chakavanzika cheMwaka inopa inonakidza kudzora sisitimu yemwaka asi inoita kunge isina zvakawanda zvekupa kupfuura iyo. Verenga zvakawanda muongororo.
Mugadziri: eXiin, Hove Cactus
Muparidzi: Modus Games
Zuva rekuburitswa: Gunyana 1, 2020
Musikana wechidiki anonzi Ariel mwanasikana wemuchengeti wenguva yechando, anodzivirira nzvimbo yake. Mushure menjodzi isingatarisirwi, heroine inosarudza kutora mugumo wenyika mumaoko ake: akashonga nebakatwa rehuni, anotiza kubva kumba uye anoenda rwendo rwe "kugadzirisa" mwaka.
Chimiro ndicho chimwe chezvikonzero zvaunofanira kutamba Ary uye Chakavanzika cheMwaka. Kunyanya, kwete kunyangwe iye, asi akacheka zviono zvakazadzwa nemajee ekuona uye nhaurirano dzehupenzi. Nehurombo - hapana mutauro weRussia. Zvakangodaro, iyo script inosekesa, uye mavhidhiyo anotaridzika akanaka seakazara-katuni pachiteshi chekuvaraidza chevana.
Vagadziri vepurojekiti iyi vakafemerwa zvakajeka neisingakanganwike yakatevedzana Iyo Ngano yeZelda: mutambo unotipa nyika yakavhurika ine mapuzzle, monsters, uye zvakavanzika. Dzimwe nguva zvakafanana neMetroidvania: tinogona kuwana hunyanzvi uye kudzokera kunzvimbo yaimbovharwa kune veruzhinji. Nekudaro, Ary uye Chakavanzika cheMwaka hachipi kukurudzira kwakawanda kune izvi: hapana mibairo yakakosha yakadai yekuita kuti iwe ude kuongorora nyika.
Saizvozvo nemaquestions epadivi, ayo akawanda. Iwe unogona kumhanyirira kumberi zvakachengeteka pamwe nemutsara wenyaya, pasina kukanganiswa nemabasa echipiri. Kuwana kutenda kubva kuNPC kwakanaka, asi zvakadini nebakatwa idzva kana zvipfeko? Maiwe, zvinhu zvekugadzirisa zvinofanirwa kutengwa kubva kune vatengesi nemari inowanwa zvakaomarara.
Iwe unotarisira chiitiko chisingakanganwike kubva kune yakavhurika nyika yemutambo, uye dzimwe nguva Ary uye Chakavanzika cheMwaka zvinorarama zvinoenderana nezvinotarisirwa. Kune mapikicha anonakidza umo zvakakosha kushandisa kugona kunowanikwa nemusikana - anoziva kudzora mwaka. Saka, kupereta kwechando kuchakubvumidza iwe kuvaka bhiriji rechando pamusoro perwizi, uye autumn mashiripiti anodana mizambiringa, iyo iwe yaunogona kukwira kumusoro kwenhare. Mune dzimwe nzvimbo, iwe unogona kuwana kunyanya anonyengerera mabasa anoda kukurumidza wits uye dexterity - kune zvakare akakwana bvunzo nekusvetuka pamapuratifomu.
Maiwe, mutambo unoshaya hondo dzinonakidza. Hondo nevapikisiwo zvavo dzakareruka uye hadzipe mibairo - zviri nyore kumhanya kupfuura kupinda mukupokana. Zvakare, iyo kamera haiite zvakaringana panguva yekunetsana, uye zvinokanganisa hazvinzwike zvachose, izvo, zvakasanganiswa neanononoka mifananidzo, uye zvinogumbura. Boss-kurwa kwakasiyana-siyana uye kunoita kuti utarise nzira yakakosha kumuvengi, asi kune vashoma vawo kuti vanakirwe nawo. Pakupedzisira, mushure mekufa, Ari haana kurasikirwa chero chinhu - kunyangwe maboss haadzorere hutano.
Rimwe dambudziko neAry uye Chakavanzika cheMwaka kusagadzikana kuita. Ndakanamira muzvinhu kasingaverengeki - uye zvinoita sekunge mutambo uyu "unoziva" bug iyi, ichangobva kunamira inokanda heroine mamita akati wandei.
Munzvimbo yekutanga, girazi rinoiswa rinoratidza zvakatendeseka zvakatipoteredza - uye nerufaro rinodziya kwete iyo isina kusimba kadhi yevhidhiyo kune tembiricha yayaisamborota nezvayo. Varidzi vemagungano ebhajeti vachave "vakagutsikana". Dzimwe nguva maumbirwo haana kudhonzwa, uye maNPC anoramba kupinda munhaurirano nehunhu.
Aya mabhugi anogona kushandiswa kukurumidza kupfuura, kunzvenga mapikicha akaoma - hongu, kana iwe uine rombo rakanaka rekuti "kusapwanya" mutambo uchiita saizvozvo. Zvinotaridza sekunge vanogadzira vanoda kutora imwe nguva yekukwenenzvera purojekiti.
Ary uye Chakavanzika cheMwaka is a mutambo wakanaka, inoda chinzvimbo uye inosetsa, asi yakaparadzwa nematambudziko ehunyanzvi uye kurwa kusina simba. Vana, avo vakagadzirirwa, havazonyadziswi, asi vatambi vakuru vachave vasina kugadzikana mairi. Naizvozvo, kana iwe unopfuura makore gumi, uye iwe uchitsvaga inonakidza platformer iwe, zviri nani kuti utarise zvakanyanya kune dzimwe sarudzo.
Category: PC MitamboBy Margaret Caffrey February 17, 2022 Leave mhinduro
Tags: Ary uye Chakavanzika cheMwakaFree DownloadMutambo Wakazarafull versionGame Full versionPC Mutambo
Share on FacebookShare on Facebook TweetShare on Twitter kubayirira naroShare musi Pinterest Share musi LinkedInShare musi LinkedIn
pashurePrevious mumhanyi;Grey Zone [v 1.0 Kwekutanga Kuwana] (2020) PCNextNext mumhanyi;HyperParasite Yemahara Yekudhawunirodha Game - Yakazara Version